တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်တွင်ဥရောပခန့်နယ်လှည့်သည် Interrailing သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်တွင်ဥရောပခန့်နယ်လှည့်သည် Interrailing သိကောင်းစရာများ
သငျသညျဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ခရီးစီစဉ်လျှင်အကြံပေးချက်များ Interrailing နှင့်တစ်ဦးဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာဖြစ်နိုင်. ၏ကုန်ကျစရိတ် ရထားလက်မှတ်တွေ, နေရာထိုင်ခင်း, အစားအသောက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဥရောပတိုက်တွင်နိုင်ငံအကြားကွဲပြားကြဘူး, ဒါပေမယ့်ခံစားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် တန်ဖိုးနည်းခရီးစဉ်. ကံကောင်းတာက, အခြို့သောပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူ, ဥရောပတိုက်တွင်ရထားလမ်းခရီးသွား သင်ထင်စေခြင်းငှါအဖြစ်နီးပါးသလောက်ကုန်ကျရန်မလိုအပ်ပါဘူး! သငျသညျဥရောပတစ်ဝှမ်းစုံလင်ခရီးစဉ်စီစဉ်ကူညီရန်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုအတူတူထားကြပြီ အဆင်သင့်သော အကြံပေးချက်များ interrailing အပေါ်ကိုလမျးညှနျ - ဘတ်ဂျက်အပေါ်ဥရောပတစ်ဝှမ်း interrail လုပ်နည်း.
Interrailing အကြံပေးချက်များအဘယ်သူမျှမ. 1 – သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းစီစဉ်နှင့်ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းနှိုင်းယှဉ်
သင့်ရဲ့ဥရောပစီစဉ်ဖို့သေချာပါစေ interrailing ခရီးစဉ် နှင့်ကွဲပြားခြားနား၏ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်း. ပိုက်ဆံချွေတာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Interrailing အကြံဥာဏ်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်ရာသီဥတုအပြင်ဘက်သို့သွားသင့်သည်. များလွန်းထိုရက်သတ္တပတ်၏ဈေးအပေါဆုံးနေ့၌ခရီးသွားခြင်း. သင်ကိုယ်တိုင်ငွေအများကြီးကိုကယ်တင်နှင့်ခရီးသွားတွေ၎င်း ဖြစ်. ရှောင်ပါလိမ့်မယ်. ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းကုန်ကျမည့်အရာအနည်းငယ်အတွက်ခရီးသွားရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိသောကုန်ကျစရိတ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ ရထားခရီး.
မည်သည့်ဥရောပတွင် ရထားစွန့်စားမှုအားဖြင့်ခရီးသွားလာ, အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်၏တဦးတည်းနေရာထိုင်ခင်းဖြစ်ပါသည်. ညဉ့်အဘို့အအိပ်အဘယ်မှာရှိ၏ရှေးခယျြမှုအလွန်သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အတွေ့အကြုံကိုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်. ညဥ့်ရထား အဘို့အကောင်းတစ် ဦး option ကိုဖြစ်ကြသည် ဒီထက်ပိုက်ဆံဖြုန်း နေရာထိုင်ခင်းပေါ်. အဲဒီမှာတညဉ့်မီးရထားပေါ်တွင်သွားလာရန်မပိုဆောင်းကြေးသည်နှင့်သင်အိပ်နေစဉ်သင်သည်လည်းခရီးသွားလာခြင်းဖြင့်သင်၏အချိန်တိုးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျမီလန်မှခရီးသွားနေတယ်ဆိုရင် ပဲရစ် သို့မဟုတ် ဗင်းနစ် ပဲရစ်ဟာရန် Thello ရထား သင့်ရဲ့ရောက်ရှိဖို့တခုအကျိုးရှိစွာနှင့်အဆင်ပြေလမ်းရှိပါတယ် ခရီးလမ်းဆုံး. ည၏ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်သင်၏ငွေရေးကြေးရေးကိုတိုးချဲ့ရန်စိတ်ကူးကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရမည့်အချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်း!
အချို့သောမြို့ကြီးများရှိ, သငျသညျအခမဲ့ပြတိုက်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးမျိုးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. လန်ဒန် တစ်ခုခြွင်းချက်ရှိပါတယ် ပြတိုက်၏အကွာအဝေး နှင့်ဆွဲဆောင်မှုသွားရောက်, တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့. ဥရောပမြို့ကြီးတွေမှာ, ထိုကဲ့သို့သောကိုပင်ဟေဂင်အဖြစ်, ပြတိုက်မှအခမဲ့ဝန်ခံချက်တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ပူဇော်သော. ဘာလင်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ပါသည် လူအပေါင်းတို့သည်မြို့ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ရှိပါတယ်.
များသော အမ်စတာဒမ်တူသောအခြားမြို့များ နှစ်စဉ်ညဥ့်အခါအားလုံးပြတိုက်အားလုံးအများပြည်သူတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ရှိသည်. သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်သည်ဤမယုံနိုင်စရာမြို့ကြီးများစူးစမ်းဖို့ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး. ယူသေချာအောင်လုပ်ပါ အားသာချက် ဤသူအပေါင်းတို့အံ့သြဖွယ်အခမဲ့၏ ဆွဲဆောင်မှု.
ဒေသခံတွေပြုပါရှိရာကိုစား – Interrailing အကြံပေးချက်များ
ဥရောပမြို့ကြီးများမှစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည် စားသည်, သင်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်အပေါ်များမှာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ. အဓိကခရီးသွားဒေသများရှိတည်ရှိပြီးစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာထမင်းစားခန်းရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ. ဤရွေ့ကားကပိုစျေးကြီးတယ်သောစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ကြပြီးမကြာခဏအစားအစာများ၏အရည်အသွေးထပ်မံထုတ်သောနေရာများထက်လျော့နည်း. အဓိကခရီးသွားဒေသတွေမှာထဲကလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အကြားစားရန်ကြိုးစားပါ ဒေသခံတွေ ထက်ဝက်စျေးကြောင်းအရသာစားစရာဘို့.
ဥရောပ interrailing စဉ်းစား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Interrailing အကြံပေးချက်များနှင့် Go ကိုမှသုံးပါ အွန်လိုင်းတစ်ဦးကရထား Save အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်. ကွဲပြားခြားနားသောဥရောပရထားလမ်းကွန်ရက်များတစ်လျှောက်လုံးရရှိနိုင်ပါသည်လျှော့ပုံမှန်အတိုင်းများများရှိပါတယ်. ငါတို့နောက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်အထူးလျှော့စျေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သေချာစေပါ facebook ကို နှင့် twitter စာမျက်နှာများလည်း.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finterrailing-tips%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / က de သို့မဟုတ် / pl နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ru ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
လန်ဒန် ရထားခရီးသွား travelamsterdam travelparis
ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာအတွက်အတှေ့အကွုံဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး၏နှစ်ပေါင်းများစွာအတူခက်ခဲအလုပ်လုပ်နှင့်အသည်းအသန်တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ကြောင်းကို. နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးအရေအတွက်ကိုကျော်, ကျွန်မခရီးသွားများ၏ဧရိယာ၌ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုစိုက်ပျိုးအဖြစ်ကောင်းစွာထို့ကြောင့်လူတွေငါမအဖြစ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးပျော်မွေ့နိုင်အောင်အကြောင်းအရာရေးသားခြင်းစတင်ခဲ့ပါပြီ. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား